Weerarka lagu qaaday macruufka iOS waxaa u adeegsaday Shiinaha inuu la socdo qowmiyada Uighur | Wararka IPhone
Shalay waxaan kuu sheegnay sida macruufka loo ahaa bartilmaameedka dhowr weerar oo muddo labo sano ah loo adeegsaday ceebaha amniga oo kala duwan maareeyaan inaad soo bandhigto basaas on our iPhone oo soo diray dhammaan noocyada macluumaadka ku jira telefoonka our haakarisku. Waxaa kashifay kooxda Google ee Zero Project, weeraradan waxaa si buuxda loo hagaajiyay bishii Febraayo ee la soo dhaafay.
In kasta oo websaydhyada rakibay basaaskan la ogaa, iyo xitaa cidda heshay dhammaan macluumaadkan, haddana Google wax faahfaahin ah kama bixin arrintaas, laakiin waxaa laga shakiyey inay tahay inay tahay dowlad dooneysa inay kormeerto kooxo dad ah oo gaar ah. Tuhunka ayaa la xaqiijiyay oo TechCrunch ayaa shaaca ka qaaday dowladda Shiinaha ayaa u isticmaashay booliiska qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Uighur.
IOS waxaa ku dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee soo mara taariikhda, laakiin horeyba waa loo xaliyay
Weerarku wuxuu u baahday booqasho websaydhada loo diyaariyey inay ku dhejiyaan qalab basaasnimo ah iphone-keena. Markii la rakibo, barnaamijkani wuxuu u diri lahaa dhammaan macluumaadka suurtogalka ah, wicitaanada, goobta iyo farriimaha websaydhada la booqday iyo xitaa dadka isticmaala iyo lambarka sirta ah ee koontooyinka dadka ay dhibaatadu soo gaadhay. Hab wax ku ool ah in waxay gabi ahaanba gacanta ku haysay koox qowmiyadeed ah oo aragtay in ka badan hal milyan oo qof sanadkii hore.
Cudurdaarka dowladda Shiinaha ee ah inay fuliso basaasnimadan ballaaran iyo inay caddeyso xarigyadan aan loo meel-dayin ee Uyghurs waa la dagaallanka argagixisada. Ku socota qowmiyada Uyghur, Muslim, Laguuma ogola inaad haysato buugaag diineed, ama gadasho, ama roogag aad diintaada ku dhaqanto. Sida laga soo xigtay The New York Times, xeryahaan lagu hayo ayaa lagu qasbay inay qaadaan heeso ay ugu hiilinayaan Xisbiga Shuuciga Shiinaha. Sida iska cad, Shiinuhu wuu diidayaa dhammaan macluumaadkaas, laakiin sidoo kale ma oggola in xeryaha lagu hayo lagu booqdo si loo hubiyo inay u hoggaansamayaan sharciyada caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 12 » Weerarka lagu qaaday macruufka iOS ayaa loo adeegsaday Shiinaha si loola socdo qowmiyada Uyghur